Portrait von Dr. Joseph Tkach - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > အဆိုပါ WCG ၏နောက်ခံသမိုင်း > ဒေါက်တာ၏ပုံတူ ယောသပ်သည် Tkach
ဂျိုးဇက် Tkach သည်သင်းအုပ်ဆရာနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း», WKG တိုတို, အင်္ဂလိပ် "ဘုရားသခငျ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း". Seit 3. April 2009 wurde die Kirche umgenannt in «Grace Communion International »။ ဒေါက်တာ Tkach သည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှစ၍ ခန့်အပ်ခံဓမ္မအမှုဆောင်အဖြစ်ကမ္ဘာ့ဘုရားသခင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်အမှုဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်၊ Phoenix, Arizona; Pasadena နှင့် Santa Barbara-San Luis Obispo တို့ဖြစ်သည်။
သူ၏ဖခင်ဖြစ်သူ Joseph W. Tkach sen ။ Dr. Dr. သင်းအုပ်ဆရာအထွေထွေမှ Tkach ။ Tkach အဟောင်းသည် ၁၉၉၅ စက်တင်ဘာလတွင် Joseph Tkach သင်းအုပ်ဆရာချုပ်ဖြစ်လာသည်။
ဒေါက်တာ Tkach ၏သင်တန်းတွင်သံအမတ်ကြီးတက္ကသိုလ်တွင် ၁၉၆၉ မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်အရီဇိုးနား၊ ဖီးနစ်ရှိ Western International University မှစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မေလတွင်၊ သူသည်ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အဇူစာ၊
သူ၏လူမှုရေး ၀ န်ထမ်းအဖြစ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ် ၁၉၇၆ တွင်စတင်ခဲ့ပြီး Arizona ရှိ Boys Ranch တွင်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားတွင်လူငယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ်အတွင်းအရီဇိုးနားပြည်နယ်အတွက်လူမှုရေးလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်လူမှုရေးနယ်ပယ်ရှိပြproblemsနာများရှိသောလူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်များကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အထိ Phoenix ရှိ Intel Corporation တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္continuingတွင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရေးဌာနကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှငှားရမ်းခဲ့သည်။
ခရစ်ယာန်ကြီးထွားမှု၊ angel ၀ ံဂေလိလုပ်ငန်းနှင့်စည်းလုံးမှုသည်ဂျိုးဇက်တိုခါအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူသည် Ev ၀ ံဂေလိအသင်းတော်၏အသင်းအဖွဲ့တွင်အမှုထမ်းပြီးအမေရိကန်ကျမ်းစာအသင်း၏အကြံပေးကောင်စီတွင်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ Mission America အတွက်သူသည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်မညီသောအခြားဘာသာတရားများသင်ကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခရစ်ယာန်ကွန်ယက်တစ်ခုကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။ သူသည် Azusa Pacific တက္ကသိုလ်၏ပါရဂူဘွဲ့ကော်မတီတွင်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ သူသည်နှစ်စဉ်ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်များတွင် Worldwide ဘုရားရှိခိုးကျောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ခရစ်ယာန်ကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အတွေးအခေါ်များဖလှယ်ခြင်းနှင့်လာမည့်နှစ်အတွက်ဘုရားကျောင်း၏ရည်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သည်။
Er wurde am 23. Dezember 1951 in Chicago, Illinois, geboren, und verbrachte dort auch die meiste Zeit seiner Kindheit, bis seine Eltern 1966 nach Pasadena umzogen. Er und seine Frau Tammy heirateten 1980. Sie haben einen Sohn, Joseph Tkach III., und eine Tochter, Stephanie.